सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको वृत्तिविकास चौपट : सपना आईजीपीको, रिटायर्ड डीएसपीमै : RajdhaniDaily.com
रोशन श्रेष्ठ - February 9, 2021 0
रोशन श्रेष्ठ - February 8, 2021 0
रोशन श्रेष्ठ - January 28, 2021 0
रोशन श्रेष्ठ - January 26, 2021 0
Home Editor-Picks सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको वृत्तिविकास चौपट : सपना आईजीपीको, रिटायर्ड डीएसपीमै
सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको वृत्तिविकास चौपट : सपना आईजीपीको, रिटायर्ड डीएसपीमै
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको माथिल्लो निकायमा लामो समयदेखि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा ‘फ्रेस’ मा भर्ना भएका अधिकृतहरुमा नैराश्यता छाउँदै गएको छ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरुलाई भावी महानिरीक्षक (आईजीपी)को रुपमा हेरिने भएपनि समयमै वृत्तिविकास नहुँदा एक तहमाथिको नायव उपरीक्षक (डीएसपी) मै अवकाश पाउने स्थिति बन्दै गएको छ ।
लामो समयदेखि वृत्तिविकासमा परेको असरले उनीहरु सेवामा रहिरहने कि राजिनामा दिने भने दोधारमा छन् । सशस्त्रको नेतृत्वमा रहेकाले उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा यो अवस्था आएको हो । यसमा हालको पदीय संरचना पनि दोषमुक्त छैन ।
सशस्त्रमा हाल डीएसपीदेखि नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)सम्म १०५ पद रिक्त रहेपनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले उनीहरु थप तनावमा छन् । लामो समयदेखि एउटै पदमा रहनु पर्दा उनीहरुमा सेवाप्रति नै वितृष्णा छाउँदै गएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्याल बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन,’ प्रवक्ता अर्यालले राजधानीसँग भने ।
नेपाल प्रहरीमा सहायक निरीक्षक (असई) र नायव निरीक्षक (सई) मा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भई आएका अधिकृतहरु उपरीक्षक (एसपी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बनिसक्दा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत ‘फ्रेस’मा इन्सपेक्टर भएकाहरु १५ वर्ष कटिसक्दा पनि एक तहमाथिको डीएसपी बन्न सकेका छैनन् ।
अवस्था यतिसम्म बनेको छ कि, नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकमा भर्ना भएका सईहरु अबको बढुवामा डीआईजी बन्नेछन् । उनीहरु डीआईजी बनेपछि पनि वरिष्ठ एसएसपीमा प्रहरीका प्राविधिक सई नै हुनेछन् । अर्काे बढुवामा तिनीहरु नै डीआईजी हुनेछन् । सेवा अवधि बढी नै बाँकी रहेकाले उनीहरु अझै सो पदभन्दा माथि पुग्नेछन् । यो फाइदा लिनेमा हालका एसएसपीहरु कालीदास धौबजी, कुमार न्यौपाने, विदूर खड्का, प्रदिपकुमार पाल, लक्ष्मणबहादुर सिंह, कृष्णराज पाठकलगायतले लिनसक्ने छन् । यद्यपि खड्काको भने सेवा अवधि अब साढे दुई वर्ष मात्र बाँकी छ ।
नेपाल प्रहरीमा उनीहरुसँगै भर्ना भएकाहरु भने अहिले पनि इन्सपेक्टर र डीएसपी छन् । नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण हुँदा प्राविधिकलाई पनि गैरप्राविधिक (इन्फेन्ट्री) मानिएकाले उनीहरुलाई यस्तो अवसर मिलेको हो । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भई गएकाहरुले राम्रो अवसर पाए पनि सशस्त्रमै खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवेश गरेकाहरु ‘अन्याय’ मा परेका हुन् । सशस्त्र प्रहरी स्थापनाताका नेपाल प्रहरीबाट ९ हजार ८ सय १४ र नेपाली सेनाबाट एक सय २० जना गएका थिए । त्यस्तै करारमा दुई हजार ५० जनालाई लिइएको थियो । सशस्त्रमा नेपाली सेनाबाट आएका अब एक जना मात्रै बाँकी छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको पदीय संरचनाअन्तर्गत आईजीपी एक, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दुई, डीआईजी, १६, एसएसपी २६, एसपी ८७, डीएसपी तीन सय ६० र इन्सपेक्टर ९४० रहेको छ । माथिल्ला तहमा दरबन्दी कम र नेपाल प्रहरीबाट आएकाहरुले लामो समयसम्म ठाउँ ओगट्दा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरुको वृत्ति विकासमा असर परेको हो ।
३७ हजार एक सय १९ दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि एआईजी ६ र डीआईजी १८ रहने व्यवस्था थियो । तीन वर्षअघि एआईजी दुई र डीआईजी १६ बनाइयो । पछिल्ला दिनमा यसले पनि सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको वृत्ति विकासमा असर पारेको देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु एआईजीको संख्या कम भएकाले कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पारेको बताउन थालेका छन् । पछिल्ला दिनमा सशस्त्र प्रहरीको ध्यान सीमा सुरक्षामा बढी नै केन्द्रित भएकाले सीमा विभागलाई छुट्टै बनाई त्यसमा एआईजीको दरबन्दी थप्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
अहिलेको स्थिति हेर्दा दरबन्दी थप नभएको अवस्थामा पाँच ओटा ब्याचका कतिपय अधिकृतहरु एसपी र एसएसपी पनि बन्न सक्ने देखिदैन । सिसं ३ देखि सिसं ७ का अधिकाँश अधिकृतहरु डीएसपी र एसपीमै अवकाशमा जाने देखिन्छ । सिसं १ र २ का अधिकृतहरु भने नेतृत्वदायी तहमा पुग्ने छन् ।
२६ कात्तिक २०५९ मा इन्सपेक्टर भएका सिसं १ का ९ जना अहिले कायममुकायम एसएसपी छन् । उनीहरुभन्दा पाँच महिनापछि ७ चैत २०५९ मा भर्ना भएकाहरु सबै जना एसपी भइसकेका छन् । जसमध्ये अब आठ जना कामु एसएसपी बन्नेछन् ।
सिसं २ भन्दा ५ महिनापछि २९ साउन २०६० मा भर्ना भएका सिसं ३ का अधिकृतहरु कहिले एसपी बन्ने कुनै ठेगान छैन । सिसं ३ मा ९६ जना पास आउट भए पनि अहिले ९० जना कार्यरत छन् । उनीहरु सेवामा प्रवेश गरेको नै १८ वर्ष पुगिसकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा हाल रिक्त एसपीको संख्या ३५ छ । तर नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका उनीहरुभन्दा सिनियर डीएसपीको संख्या ५८ छ । जसमध्ये प्रविणता तह उत्तीर्ण गरेकाको संख्या २८ रहेकाले ३० जना मात्र एसपीका दाबेदार छन् । त्यसैले अबको बढुवामा सिसं ३ का अधिकृत पनि पर्नेछन् । तर सेवा अवधि १८ वर्ष पूरा भइसकेकाले प्रहरीबाट आएका र फ्रेसमा आएका सिसं ३ का अधिकृतहरुलाई मिलाएर बढुवा गर्नुपर्ने मत पछिल्लो समय बलियो हुँदै गएको छ ।
हाल सशस्त्रमा सिसं ५ सम्मका इन्सपेक्टर डीएसपी भइसकेका छन् । सिसं ४ मा ९७ र सिसं ५ मा ८९ जना सेवा प्रवेश गरेका थिए ।
अबको पालो सिसं ६ को हो । २१ फागुुन २०६२ मा फ्रेसमा भर्ना भएका सिसं ६ का इन्सपेक्टरहरु १६ वर्ष लागिसक्दा पनि डीएसपी हुन सकेका छैनन् । हाल सशस्त्रमा रिक्त डीएसपी पद संख्या ६० छ ।
सिसं ६ मा एक सय १ जना सेवा प्रवेश गरेको भएपनि हाल ९३ जना कार्यरत छ । उनीहरु सबै जना अहिले बढुवामा पर्ने छैनन् । जबकि नेपाल प्रहरीमा उनीहरुसँगै इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरु डीएसपी भएकै पाँच वर्ष पुुग्न लागिसकेको छ ।
सशस्त्रका अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सिसं ६ भन्दा सिसं ७ मा भर्ना भएका इन्सपेक्टर बढी मारमा पर्नेछन् ।
६ असार २०६४ मा इन्सपेक्टर बनेको सो व्याचका एक सय ३१ जना छन् । सो ब्याचका कतिपय इन्सपेक्टरहरु २८ वर्षपछि मात्र डीएसपी बन्नेछन् । उनीहरु टीके एसपी पनि बन्ने छैनन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा अवकाश हुने बेला एक तह बढुुवा हुन पाँच वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । त्यसैले उनीहरुले यो सुविधा पनि पाउने छैनन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार गठन भएको कानुन र लेखा उपसमूहले पनि सशस्त्रमा थप बेथिति निम्तिएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरी लेखा उपसमूहमा गएका सिसं ४ का राजकुमार ढकाल र ५ का करबहादुर घर्ती अहिले पनि सोही पदमा कार्यरत छन् । जबकि, सिसं ५ सम्मका सबै जना डीएसपी भइसकेका छन् । सशस्त्र नेतृत्वले उनीहरुका पीडा र समस्या पनि बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
(Visited 876 times,2visits today)
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा २४४२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६६७७ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा...
वालिकालाई खेलाउछु भन्दै आँप बगैचामा लगेर बलात्कार
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ बसबिट्टीकी ४ वर्षीया बालिका आफ्नै छिमेकीद्वारा बलात्कृत भएकी छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार बालिकालाई सोही वडाका ५० वर्षीय छेदु...
झोलामै सहकारी : अनुदानमा ल्याएको मलमा कालोबजारी
सिन्धुपाल्चोक । कृषि सामग्री संस्थाबाट सहुलियतमा खरिद गरेर ल्याएको रासायनीक मलमा व्यापक कालोबजारी भएको छ । बाह्रविसे नगरपालिका–४मा सञ्चालित कफेश्वरी कृषि सहकारी संस्थाले सरकारी...
अस्मित र आँचल दोस्रो मिस्टर एन्ड मिस रौनियार
काठमाडौं । मिस्टर रोनियार २०२१ को उपाधि अस्मित गुप्ताले र मिस रौनियार २०२१ को उपाधि आँचल रौनियारले जितेका छन् । काठमाडौं विराटनरलगायत विभिन्न स्थानका...
खेताला खोजेर विरोध गर्न थालियो : पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा
प्रदेश ३ रोशन श्रेष्ठ - December 12, 2020 0
काभ्रेपलाञ्चोक । पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैका नेताले अर्का पार्टीका ‘खेताला’ खोजेर विरोधमा लगाउने काम शुरु भएको दाबी गरेका छन् । बनेपा...
बिचार गोपीनाथ मैनाली - June 12, 2021 0
विश्वबैंकले थप सवा ५४ अर्ब ऋण सहयोग गर्ने
Breaking News रोशन श्रेष्ठ - June 11, 2020 0
काठमाडौं । विश्व बैंकले आर्थिक पुनर्बहालीका लागि नेपाललाई करिब ५४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ थप ऋण सहयोग दिने भएको छ । विश्वबैंकले रणनीतिक सडक...
अर्थ रोशन श्रेष्ठ - December 5, 2020 0
अगुएरो बार्सिलोना आउने
Not-to-be-missed एजेन्सी - May 23, 2021 0
लन्डन । अर्जेन्टिना तथा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका कीर्तिमानी फरवार्ड सर्जियो अगुएरो क्याटलान क्लब बार्सिलोना आउने भएका छन् । बार्सिलोनाले फ्रि ट्रान्सफरमा ३२ वर्षीय अगुएरोलाई...
सबै संक्रमित डिस्चार्ज भएपछि नारायणी अस्पताल सेनिटाइज
प्रदेश २ रोशन श्रेष्ठ - May 26, 2020 0
वीरगन्ज । दुई जना पत्रकारसहित अस्पतालमा बाँकी रहेका ४३ जना कोरोना संक्रमित ठिक भई सोमबार एकै पटक डिस्चार्ज भएपछि नारायणी अस्पताललाई सेनिटाइज गरिएको छ...
Breaking News मान बहादुर कुँवर - April 16, 2021 0
Not-to-be-missed रोशन श्रेष्ठ - February 18, 2021 0
Breaking News रोशन श्रेष्ठ - September 16, 2020 0
अभिनेता रणवीर र निर्देशक भन्साली कोरोना संक्रमित
Not-to-be-missed एजेन्सी - March 10, 2021 0
मुम्बई । मुम्बईमा पछिल्लो समय कोरोना बढेपछि त्यसको प्रभाव बलिउडमा पनि परेको थियो । यसै क्रममा बलिउड अभिनेता रणवीर कपुरलाई पनि कोरोना पोजेटिभ भएको...
डा. देवीप्रसाद आचार्य - June 17, 2021
ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश
निराजन पौडेल - June 19, 2021
विवेक विवश रेग्मी - June 20, 2021
रोशन श्रेष्ठ - March 5, 2020